लकडाउनमा घर आउन नपाएका श्रीमान अर्कै महिला’सँग कोठामा मृत’ फेला, श्रीमतीको बेहाल (भिडियो) – Taja Khawar
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन १५, २०७८ समय: १८:५३:२१
घ टना बर्दियाको हो । लकडाउन’को समयमा काममै होलान् भनेका श्रीमान अर्कै महिलासंग मृ त फेला परेपछि श्रीमती’को बिचल्ली भएको छ । महि’ला झु ण्डिए’को अवस्था’मा र पुरुष खाटमा सुतेको अवस्थामा मृ’त फेला परेका हुन् ।
श्रीमती र छोराछोरी समेत रहेको पुरुष ति महिलाका घरमा कसरी गए ? अथवा कसैले उनलाई त्य’हाँ सम्म कसले लग्यो ? यो अनुसन्धान’को विषय हो । उनको परिवारका सदस्यले भने आफ्नो’ छोरा त्यस्तो ब्यवहार गर्ने खालको नभएको भन्दै घट’नाको निष्पक्ष छानविन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
श्रीमानले अर्कै श्रीमती लिएर भारत गए’पछि एक्लै बस्दै आएकी महिलाको घरमा उनी मृ त फेला परेका हुन् । ति महिला’ले भर्खर नयाँ घर बनाएकी थिइन् । भिडि’योमा देखिए’को यो घर उनै महिलाको घर हो ।
महिलाकै घरमा ति पुरुष मृ त फेला परेका हुन् । बाँके जिल्ला निवासी चौधरी ग्रुपको वाइवाई चाउचाउको फ्या’क्ट्रीमा काम गर्ने उनी लकडाउनक कारण बर्दियामै बस्दै आएका थिए । आफ्ना श्रीमा’न अर्कै महिलाको कोठामा महिलासंग मृ त फेला परेको जानकारी पाएपछि श्रीमतीको वेहाल भएको छ । उनले आफ्नो श्रीमा’नको बारेमा यस्तो खबर थाहा पाउँदा विश्वास नलागेको बताइन् ।
उनले कामका लागि वर्दियामै बसे’को होला भन्ने आफुलाई लागेको उनले बताइन् । उनले आफ्नो श्रीमानको बानी त्यस्तो नराम्रो नभएको बताइन् । कहिल्यै शंका लाग्ने ब्यवहार नै नगरेको उनले बताइन् ।
उनले आफ्नो श्रीमानको मोवा’इलमा कहिल्यै ‘केटीको फोन पनि नआएको बताएकी छन् । उनले आफ्नो श्रीमान माथि कसैले ष ड य न्त्र गरेको दावी गर्दै सत्य तथ्य छानविन गर्न माग गरेकी छन् ।
दिउसो खानाखान पनि घर जाने, एक मि’नेट पनि कतै नभुल्ने श्रीमान यस्तो अवस्थामा फेला परेपछि श्रीमतीले घ ट ना रह स्य मय भएको बताइन् । – (नेपाल भाइरल न्युज) भिडियो हेर्नुहोस…
Last Updated on: July 30th, 2021 at 6:53 pm